गोरखा बजारमा पानीपुरी र चटपटेमा प्रयोग हुने अमिलो बिषालु | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखा बजारमा पानीपुरी र चटपटेमा प्रयोग हुने अमिलो बिषालु
Published On : ३० बैशाख २०७८, बिहीबार १४:३६
पानीपुरी र चटपटे कत्तिको खानुहुन्छ ? गोरखा सदरमुकाममा यसको राम्रै खपत देखिन्छ । अहिले कोरोनाको त्रास र निषेधाज्ञा भएका कारण फुटपाथमा ब्यापारी देखिँदैनन ।
अन्य सामान्य समयमा चोकचोकमा चटपटे र पानीपुरी खानेको लर्को देखिन्छ । तर तपाईले खाइरहनुभएको पानीपुरी, चटपटेमा प्रयोग हुने अमिलो भने खानै नहुने भेटिएको छ ।
गोरखा सदरमुकामको बजार क्षेत्रमा पानीपुरी र चटपटेमा राखिने अमिलो पदार्थ विषालु भेटिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलवार र बुधवार बजार अनुगमनका क्रममा बजार क्षेत्रको पसलबाट २८जर्किन अमिलो पदार्थ बरामद गरेको छ ।
उक्त अमिलोमा उत्पादकको नाम, प्रयोग गर्ने अवधि, लेबल नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत गणेश भट्टराईले बताए । कालिका मसला एण्ड किराना पसलबाट १८ जर्किन र बिनोद मसला एण्ड किराना पसलबाट १० जर्किन अखाद्य अमिलो बरामद गरिएको उनले बताए ।
१५ प्याकेट म्याद नाघेको पानी पुरी, म्याद नाघेको मसला, मिश्री, कुरकुरे, बेसन, भाई मसला, दालमोठ, बिस्कुट, सोयाबिन, भुसी लगायतका खाद्यान्न अनुगमन टोलीले जफत गरेको थियो ।
संजग किराना पसल, गुप्ता मसला एण्ड किराना पसल, शिव किराना पसल, अनुस्का मसला एण्ड किराना पसल, ताप्ले किराना पसल, सुशील किराना पसल लगायतबाट यी सामग्री बरामद गरिएको अनुगमनमा खटिएका प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए ।